Ukuhlamba amabhatshane amabhinqa
Unyaka wonke, ukulungiselela ixesha lokuhlamba, ummeli wesini esilungileyo ufuna ukuhlaziya ikhabethe lakhe, ukuzalisekisa ngeendlela ezintsha, izitayela. Oku kusebenza kwiifutshane zokuhlamba, ezifanelekileyo kubafazi abaneentlobo ezahlukeneyo zobume .
Iimpahla zokugqoka zamabhinqa - iimpawu ezidumile
RIPCURL . I-brand yase-Australia iya kuguqula iholide eliyingozi kwihambo elingalibalekiyo. Imodeli nganye yamancinci amabhinqa okushisa ilanga nokubhukuda emanzini olwandle yenziwa ngezinto eziphezulu.
Wildfox . Uphawu lwe-American, oluthandwa ngulo lonke ulutsha, ludala izinto ezintle. Ngoko, ukutshiza iifutshane kuboniswe kwindlela yokugqibela yefashoni. Apha unokufumana iimpahla kunye nomphumo ogqithisileyo we tai-da.
River Island . Kwaye loo maantombazana afuna ukubukeka njengowesifazana, uphawu oludumileyo lwehlabathi luye lwadala iifutshane zokuhlamba, i-skirt. Impahla ayinayo kuphela isitayela esicacileyo, kodwa iphrinta yokuprintwa kwembali.
Ukutshiza amafutshane amabhinqa - iingcebiso zabacwangcisi
Xa ukhetha ukuthungwa, kubalulekile ukuqwalasela ukuba awunjani na amanyathelo asemgangathweni, kodwa uluhlobo luni lomfanekiso olukhethiweyo. Ngoko, okokuqala, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iifutshane zokubhukuda, kunye nezibini eziphantsi kwaye eziphakamileyo azikhuthazelwanga kumantombazana "ngonxantathu", kuba kulo mzekelo kuyisifuba esincinci kunye namaqatha amaninzi. Iifutshane ziza kugxila kwiinqununu eziluhlaza.
Kwaye, ukuba le ntombazana inomfanekiso "wecathathu enxantathu" (amanxeba amaninzi kunye namaqatha amancinci), ngoko-ke iifutshane zokuhlamba ziya kuba, njengangaphambili, ngendlela. Kwakhona le ndlela ifanelekileyo "emaceleni", apho kuyimfuneko ukuba ibonakale iqinile kwinqeni. I-suit yokubhukuda iya kukwazi ukugxininisa ngokucacileyo ukubunjwa kweempawu, ukunikela umfanekiso wesibini.
I-Coat-cardigan - iifoto ezingama-28 zemifanekiso yezandla kuzo zonke izihlandlo
Iingubo zokugqoka kwi-chiffon
Iingcali zamaTyhini - ukudibanisa imfashini kwimifanekiso eyahlukileyo
Ugqoke ngepotton phantsi
Iingubo ezigubungele phantsi kunye nemikhono
Iibhotile ze-Nubuck zasebusika
Ugqoke kunye neelom
Iibhotile zebhola ngebhoyile
Izambatho zesikolo zabantwana
Ukuthungela umrhwebi ebhodweni
Indlela eya entliziyweni yomntu
Ukuprintwa kweentyatyambo ngo-
Umhluzi wenkomo yeenwele
Ukuphindaphinda kwe-mitral valve ye-1 degree
UMartin Freeman wathetha ngokuqhawula umtshato kunye nomnye osebenza naye kwi-series "uSherlock"
Unokukhulelwa njani emva kokukhipha isisu?
Unyango lwefungus kunye nezilwanyana zomntu
Ngaba kunokwenzeka ukuba uncelise i-anyanisi eluhlaza?
Ushizi owenziwe kwi-cottage cheese ekhaya
Yintoni enxulumene noKate Winslet noLeonardo DiCaprio?
Ukuphuza amazinyo kubantwana
I-Nugush - inonwabo yolonwabo
I-ultrasound - iiveki ezi-7
Isambatho se-Fur ephuma kwimouton ene-hood-imifanekiso engama-40 kwiimfesane
Iingubo eziqhelekileyo zokugqoka
I-sausage yehhashi inyama
Indlela yokutshintsha umntu kumfanekiso?
20 ukuzonwabisa iingcamango malunga nendawo yokuvela kunye nokufa kwe-Atlantis, ongazange uyive!
Ukungabikho kwamathambo ebantwaneni